Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ‘ပန်းရဲ့လမ်း’ ဂီတလှုပ်ရှားမှု
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ‘ပန်းရဲ့လမ်း’ ဂီတလှုပ်ရှားမှု	မျိုးသန့်	| တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၂ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်သည့် ကိုရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) ဦးဆောင်၍ ‘ပန်းရဲ့လမ်း’ အမည်ရှိ အဖွဲ့တခုကို တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေရှာကာ ကူညီသွားမည်ဟု ကိုရဲလွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“ရန်ပုံငွေရှာတာရယ်၊ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သီချင်းဆိုပြီးတော့ ရန်ပုံငွေရှာတာပေါ့။ အလှူငွေ မရရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သီချင်းဆိုရင်း ပြောနေမှာပေါ့ဗျာ။ လူထုကြားထဲကို ရောက်သွားအောင်ပါ” ဟု ကိုရဲလွင် က ပြောသည်။ပန်းရဲ့လမ်း အဖွဲ့တွင် အဆိုတော်နှင့် တေးရေးဆရာများဖြစ်သည့် သားထွေး၊ တိုးလွင် (ဥတ္တရအလင်း)၊ ညီညီလွင်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Morning Star လက်ဘက်ရည်ဆိုင်၊ အလုံမြို့နယ်ရှိ IC၊ ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ ဒေါ်ကြည် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး ရန်ပုံငွေ ၉ သိန်းကျော် ရရှိသည်ဟု ကိုရဲလွင် က ပြောသည်။“ကျနော်တို့က တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်လို့ ထလုပ်တာပဲလေ။ အရင်တုန်းကတော့ ဒါမျိုးလည်း ကျနော်တို့ထလုပ် တာမရှိဘူး။ ကျနော်တို့ လုပ်ခွင့်ရတာလည်း မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ သီချင်းဆိုတာက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆိုခွင့်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ ဖန်တီးတာပဲ။ ကိုယ့်ကို အားပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာ အလှူငွေ ကောက်တဲ့ ပုံစံမျိုးလေးပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ စစ်ရပ်စဲဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ လူရင်းတွေချည်းပဲ ကျနော်တို့ စုဖွဲ့ထား တာပါ” ဟုလည်း ကိုရဲလွင် က ပြောသည်။ပန်းရဲ့လမ်း အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်များတွင် တပတ်လျှင်တကြိမ် ဖျော်ဖြေပွဲများ ပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်ပြီး ရရှိသည့် လှူဒါန်းငွေများကို တလတကြိမ် ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များထံ ပေးပို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှင့် အစိုးရတပ်တို့ကြား ဝိုင်းမော်မြို့နယ် ပါဂျောင်ဒေသတွင် တနင်္ဂနွေနေ့က တိုက်ပွဲငယ် တခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု ၂၀ ခန့် တရုတ်နယ်စပ်သို့ တိမ်းရှောင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟုလည်း KIO စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် ကူညီရေးကော်မတီ တာဝန်ခံ ဦးဒွဲပီဆားက ပြောသည်။“မနေ့ကဆိုရင် အိမ်ခြေ ၂ဝ ကျော်ရှိတဲ့ ရွာမှာ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံကျလာတဲ့အတွက် ပြောင်းလာဖို့ ရှိပါတယ်။ မိုးကလည်း ဝင်လာတော့မယ်။ လူဦးရေကလည်း ဒီလောက် များတယ်ဆိုတော့ စားရေးသောက်ရေးကတော့ ပူပန်ပါ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကူမယ့်လူ မရှိရင်တော့ ကျနော်တို့အတွက် စိတ်ပူစရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြော သည်။တရုတ်နယ်စပ်တွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း ၁၉ ခုခန့် ရှိနေပြီး ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ လိုင်ဇာ၊ မန်စီ၊ မိုင်ဂျာယန်၊ လွယ်ဂျယ်၊ ဒေါ့ဖုယန်၊ ဝိုင်းမော်နှင့် မန်ဝင်းကြီး မြို့နယ်များတွင် ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း ၄ဝ ကျော်ရှိနေသည်။ ဒုက္ခသည်စခန်းအားလုံးတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ငါးသောင်းကျော် ခုံလှုံနေနိုင်သည်ဟု ဒုက္ခသည် ကူညီရေးကော်မတီက ခန့်မှန်းထားသည်။ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ဒုက္ခသည်စခန်း ၁၁ ခုသို့ သွားရောက်ကာ အလှူငွေ သိန်း ၃ဝဝ လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရဲတိုက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“စုနေကြတယ်၊ စုချက်စားကြတယ် ကူညီမယ့်လူကတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူထက်စာရင် နည်းတယ်ဗျ။ သူတို့ပြော တာကတော့ အဓိက လိုတာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲပေါ့။ သူတို့ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ မနေချင်တော့ဘူး။ အဲဒါမျိုးတွေ ပြောကြပါတယ်” ဟု ရဲတိုက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပေါင်းစည်းရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ဆောင်ရွက်မည်ဆို
ကျည်ဆံခွံ ဆင်းတုတော်နှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် လိုင်ဇာသို့ ပို့ဆောင်	ဒုက္ခသည်များအတွက် လျာထားမြေကို ရောင်းစားသည့်ကိစ္စ ပြည်ထဲရေးတိုင်မည်ဟု တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ဆို	KIO နယ်မြေတွင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလ ကူညီမှုများ ဒုတိယအကြိမ် ရရှိလာ	ကချင် စစ်ပွဲတွင်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးသွားသူများအတွက် ရန်ပုံငွေရှာ	ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ ကျောင်းမတက်နိုင်သေး	ကချင်စစ်ပွဲ နှစ်နှစ်ပြည့်တွင် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း နှစ်ဆယ့်ရှစ်ဖွဲ့က သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ရှစ်ချက် ထုတ်ပြန်	ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ အမေရိကန် သံတမန်များ မြစ်ကြီးနားသို့ သွားရောက်လေ့လာ	Who is Online
We have 136 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved